Frank johnson, nkp Martech Zone
Frank John Nwokocha
Ide ederede akwụkwọ ozi bụ echiche nke gbasoro laa azụ n'oge gara aga. N'oge ahụ, akwụkwọ ozi ire ere bụ ihe a na-emekarị iji dochie ndị na-ere ahịa site n'ọnụ ụzọ ruo n'ọnụ ụzọ na olulu ha. Oge a chọrọ ịbịaru ọgbara ọhụrụ (lee anya na mgbanwe na mgbasa ozi ngosi) na ide akwụkwọ ozi azụmaahịa abụghị otu. Principlesfọdụ ụkpụrụ izugbe gbasara ụdị na ihe dị iche iche nke leta ire ahịa ka na-adị. Nke ahụ kwuru, usoro na ogologo nke akwụkwọ ozi azụmahịa gị dabere